Ardayda Dugsiga Ugaas Yaasiin oo Qabsaday Xaflad heer sare ah+Sawiro – SBC
Ardayda Dugsiga Ugaas Yaasiin oo Qabsaday Xaflad heer sare ah+Sawiro
Posted by Webmaster on March 31, 2013 Comments
Ardayda Dugsiga dhexe ee Ugaas Yaasiin ayaa Xaflad balaaran oo ay ku qabsadeen gudaha Magaalada Boosaaso waxa ay ku soo bandhigeen heerka ay gaarsiisantahay waxbarashadooda iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan u fariisiga Imtaxaamaadka Dugiyada dhexe ee Puntland oo sanadkan ay u fariisandoonto arday kor u dhaafeysa 1700 oo arday.
Culimaaudiin, Waxgarad, Waalidiin, Nabadoono, Macalimiin iyo weliba Masuuliyin ka socotay wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa ka qeyb galay xaflada, waxaana dhamantood hadalo ay halkaasi ka jeediyeen ku amaanay dugsiga Ugaasyaasiin iyo ardayda heer dugsi dhexe ee iyagu qabsaday xaflada.
Waxa ay ku soo bandhigeen halkaas ardayda aqoontooda kala duwan iyagoo ka aqriyay goobta xaflada qoraalo ay ugu talagaleen xaflada aqoon saa id ahna ku dheehantahay.
Ismaaciil Xaaji Warsame Maamule ku xigeenka Iskoolka hoose dhexe ee Ugaas Yaasiin ayaa sheegay in aqoon la’aani ay iftiin la’aan tahay kuna booriyay ardaydan qabsaday xaflada soona bandhigay aqoontooda ay sii kordhiyaan kuna talagalaan in ay yihin mustaqbalkii dalka.
Maxamed Siciid Geele waxa uu ka mid yahay macalimiinta Wax soo baray Ardaydan, waxaanu halkaasi ka faah faahiyay Ujeedka Xafladan isagoona sheegay in ay tahay Muujinta dhiiragelinta waalidiinta ardayda intaasi ku soo tabceysay awlaadooda iyo in ardaydu duco uga dalbadaan dhamaan waalidiinta iyo inta wax soo bartayba.
Xildhibaan Galeyr oo ka tirsan golaha deegaanka Boosaaso islamarkaana ah madaxa Arimaha Bulshada gobolka ayaa sheegay in magaca iskoolka uu wato ee ah ugaas yaasiin uu yahay nin halyey ahaa oo siweyn uga soo qeyb qaatay aas aaskii puntland ku soo dabaalida nabadeed ee deegaanada iyo hormuud aan la ilaaweyn.
C/laahi Xasan Cadami oo qaabilsan qeybta waxbarashada Boosaaso ee wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa isna halkaasi ka shegay in uu aad ugu faraxsanyahay ardaydan heer dugsi dhexe ee qabsaday xafladan qiimaha badan una hambalyeynayo.
Sikastaba ha ahaatee waxaa halkaasi ay ku gudoonsiiyeen Ardayda Macalimintii wax soo bartay abaal marino iyo shahaadooyin ay ugu talagaleen, iyagoo u soo jeediyay mahad celin balaaran .